Ice cube tray Factory |China Ice cube tray Ndị na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ya
Obere Bees Silicone Honeycomb Ice Cube Tray nwere mkpuchi mkpuchi na-agbanwe agbanwe
Silicone ọkwa nri:Mpempe ice ejiri silicone ọkwa nri mee, chekwaa ice gị maka ịṅụ mmanya.Enwere ike iji cubes ice ndị a maka nri okenye & nri ụmụaka, Ọ dị mma maka iji na friza, oven, efere efere, friji na ngwa ndakwa nri.
Mwepụta ice & dị ọcha:Ihe silicone na-agbanwe agbanwe na-akpụzi ala nke ọma, mee ka ọ dị mfe ịhapụ ice cubes.Igwe silicone dị nro na-eme ka ọ dị mfe ihicha.Reusable, nke na-adịghị mma elu, (Anyị na-akwado ka ị wepụ ya na refrjiraeto ma hapụ ya maka ihe dị ka nkeji 3-5. na-echere ice na-agbaze ntakịrị mgbe e wepụrụ ya na refrjiraeto. Ma mgbe ahụ na-ahapụ ice cubes. ga-adị mfe.) Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike mfe ịkwanye site na ala.
Amazon Top ere akwụkwọ gummy Silicone candy ebu
Ojiji dị iche iche:Akpụkpọ ice cream anyị na-eme n'onwe anyị nwere ọtụtụ ojiji, ice cubes nwere ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, jelii maka oriri, nri kpọnwụrụ akpọnwụ, yana nwekwara ike iji maka ịchekwa nri na mkpụrụ osisi maka ụmụaka.
Nhazi okike:Akpụkpọ akpụrụ akpụ ọ bụla nwere osisi popsicle plastik asaa.ọ bụghị naanị na enwere ike iji ya dị ka nchekwa nri nwa, kamakwa zuru oke maka ịme popsicles maka ụmụaka n'oge okpomọkụ.
Ihe okike okike: Akpụkpọ akpụrụ akpụ ọ bụla nwere osisi popsicle plastik asaa.ọ bụghị naanị na enwere ike iji ya dị ka nchekwa nri nwa, kamakwa zuru oke maka ịme popsicles maka ụmụaka n'oge okpomọkụ.
Dị ka foto
Minnt, Pink, Sky BlueColor ma ọ bụ omenala agba
-40 ~ 230 ogo
Ọ dị mfe ịgbapụta ma dị ọcha: Ụdị silicone na-agbanwe na nke na-abụghị osisi dị mfe ịsacha, Naanị saa na mmiri dị ọkụ na-ekpo ọkụ ma kpochaa mmiri dị ọcha, na efere efere dị.
Igwe nju oyi echekwabara n'ụlọ emere n'ụlọ Ice Pop Mold DIY nwere mkpuchi mkpọ Popsicle Mold Cartoon Ice Cream Molds
A na-eji Cand na oven, friza, efere efere na Microwave.Nwere ike iguzogide okpomọkụ site na-40 degrees Fahrenheit ruo 446 degrees Fahrenheit.Ya mere, ndị a na-emepụta ice pop nwere ike iji kpoo cubes na sie nri.
Ọ dị mfe ịsa:Igwe anaghị agba nchara ga-ahapụ nri n'enweghị mgba.Mgbe ejiri ya, ị nwere ike ịsacha ha site na aka ma ọ bụ tinye ha na efere efere.Nkwalite imewe nwere ike ibelata ohere ịwụfu na ụdị mara mma ga-ewetara ezinụlọ gị ụtọ karịa.
24 Cavity Whiskey Nnukwu Ice Cube na-akpụzi ngwa nju oyi na-echekwa Mpempe akwụkwọ Silicone Ice Cube Tray
Ice Cube Tray zuru oke maka whiskey na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ: Ọ dị mma maka cocktails, punch, kọfị iced, ice flavored na ndị ọzọ n'oge okpomọkụ.Oghere ice cube ga-enye gị obi ụtọ ịme ice.Ị ga-anụ ụtọ ahụmihe ime ice.
Ime nri nri ice DIY: trays cube na-enye gị ahụmịhe ịme ice dị ụtọ karịa.Zuru okè maka ịme ice cubes ma ọ bụ jupụta trays na ihe ọṅụṅụ, mkpụrụ osisi, yogọt, jelii, chocolate.
Omenala 8 Cavity Silicone Nnukwu Ice Cube Tray Mold na mkpuchi Chocolate Silicone Molds
Ihe mkpuchi nke enwere ike ikpokọta & nke mbughari: na-abịa na mkpuchi mbughari, na-egbochi cubes ice ka ọ ghara ịmịpụta ísì friza.Traịlụ ndị a dị mfe ịtọhapụ na-ekpokọta ngwa ngwa na nke ọma na friza na-araparaghị ya.
Nhazi COMPACT: nha kọmpat na-enye ohere ịchekwa ohere ka ọ dabara nke ọma na friji ụlọ ọ bụla, RV ma ọ bụ obere ngwa nju oyi.